भाग्यमानी छोरो – Part 27 - फेरी चियाबारीमा 1 - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 27 – फेरी चियाबारीमा 1
फेरी चियाबारीमा 1
अघिल्लो दिननै विकेश र विकेशको आमासँग सल्लाह भईसकेको थियो कि अलि एकान्त र खुल्ला चियाबारीमा रमाईलो गर्ने भनेर । बिहान सबेरै झिसमिसेमै उठेर मैले आमा र सानीआमालाई खाना खान आउँदिन भनेर विकेश बसेको होटलतिर लागें । हिजो विकेशको आमासँग रमाईलो गर्दाखेरी कोठामा बियर ल्याउने केटीसँग मेरो भर्*याङ्गमा जम्काभेट भयो, मलाई तलबाट उक्लिदै गरेको देख्नासाथ उ मुस्काउँदै बिच भर्*याङ्गमै रोकिएकी थिई । म माथी उक्लदै गर्दा उसँग जिस्कने मुड भन्यो र सिंढी उक्लेर उसको अगाडी पुगेपछी उसको हात च्याप्प समातेर आफ्नो पेन्टको जिपरमाथी राखिदिदैं भनें “के हो मैयाँ ! मोहनी लाग्यो जस्तो छ नि मेरो भाईसँग ?” भन्दै उसको हातलाई पेन्टमाथी नै छोडेर उसको पोका सहलाउन थालें, अलि असुरक्षित त थियो त्यो ठाँउ तर पनि झिसमिसे अध्येरोंमा मलाई मजा आईरहेको थियो भने ऊ मेरो सामु आत्मसमर्पण गरेर बसेकी थिई । त्यतिकैमा तलबाट आवाज आयो “सन्ध्या ! कहाँ हराई यो ?” त्यसपछी आत्तिदैँ त्यो केटी मसँगबाट छुट्टिएर तल भागी । म कोठामा पुग्दा विकेश र उसको आमा पुरै तयार भएर बसेका थिए । “अनि गाडी आयो त?” “गाडी त अघिनै आईसक्यो नि ? हामी त तलाईं नै कुरेर बसिराको नि ?” मैले विकेशको आमाको पुठ्ठालाई च्याप्प समातेर भनें “गाडी त आयो अनि गाँडीको चाँही के छ त ? रेडी हो ?” “म त सधैं नै रेडी छु नि ?” मैले विकेशको आमाको स्कर्टलाई माथी सारेर हेरें, उनले पेन्टी लगाएकी थिईनन् “हँ ! यो हो नि पारा !” अनि पुठ्ठामा एक हल्का थप्पड लगाउँदै भनें “एउटा टावल वा सल जे भएपनि राख्नुस् है ! आवश्यक पर्न सक्छ !” त्यति भन्नासाथ विकेशको आमाले ठूलो झोलाबाट एउटा पछ्यौरा निकालेर आफ्नो हेण्डबैगमा घुसारिन् “ल निस्कौं ढिलो भयो भने सुर्योदय हेर्न पाईदैन रे !”
त्यसपछी हामी गाडी चढेर फिक्कल हुँदै श्रीअन्तु डाँडातर्फ लाग्यौं, स्थानिय क्षेत्रमा चलिरहेको जिप भएर होला हामीलाई तुफान श्रीअन्तु डाँडाको फेदीमा लगेर उतारिदियो, त्यो जिप दिनभरीको लागि हामीले रिजर्वमा लिएका थियौं । हामीलाई केही समय पैदल पनि हिँड्नुपर्ने थियो, त्यसैले जिपवालालाई मैले साढे नौ बजेतिर मात्रै फर्किने कुरा बताएर हामी पैदलै लाग्यौं, विकेश र विकेशको आमा सँगै म तिनैजना सकेसम्म गफ नगरीकन माथी पुग्ने निधो गरि हिँडेका थियौं तर हामी जस्ता निकै पर्यटक त्यहाँ थिए, जो सुर्योदय हेर्नकै लागि पुगिरहेका थिए र उनीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन जाने पनि नजाने पनि गफ आफैं सुरु भईहाल्दो रहेछ । सुर्योदयको प्रशिद्ध ठाउँमा बसेर सुर्योदय हेरिसकेपछी मैले वरपर चारैतिर हेरें । मैले खोजेजस्तो ठाँउ पाउन फिक्कल बजारकै आसपास पुग्नुपर्ने जस्तो देखें, जता पायो तेतै पुग्दा मानिसहरु खोज्न आउलान भन्ने पनि टेन्सन हुन्थ्यो । डाँडाबाट निकै तल झरेपछी मैले बाटोको दाँयातिर विकेश र उसको आमालाई हिँड्न भनें, पछाडीका मानिसहरु हामीभन्दा निकै पछाडी थिए र उनीहरुको सिधा नजरबाट हामी ओझेलमा पर्थ्यौं । अगाडीका मानिसहरुले पछाडी फर्केर हेर्ने कमै सम्भावना पनि थियो । तैपनि मैले छिटोछिटो पाईला अगाडी बढाएँ, मेरो साथमा साथ दिदैं विकेश र उसको आमा पनि आए । बस्तीको नजरबाट नोटिस नहुने ठाउँमा पुगेपछी म टक्क अडिएँ र पछाडी फर्किएँ । विकेशले सोध्यो “के भयो कोही छ कि क्या हो पर्तिर ?” मैले भनें “तँ मुजी पनि के नचाहिदो कुरा गर्छस् अब त मैले तेरो आमालाई नाङ्गै चियाबारीमा कुदाउँछु !” अनि विकेशको आमाको पोकामा हात लगेर मसल्दै भनें “आमा ! अब मजा लुट्ने होईन त ?” त्यसपछी विकेशको आमाको मुखबाट कुनै शब्द झर्न नपाउँदै मैले टि-शर्ट छातीबाट माथी सारेर खोलिनै दिएँ, ब्रा हिजै नलाउने सल्लाह भईसकेको थियो ।
विकेशको आमाले पोकालाई मेकअप गरेर निपलको कालो घेरामा गुलाबी कलर लगाएकी थिईन् र मैले उनको पोका समाएर चुस्दै भनें “ओई मुजी यो रण्डीसित मेरो फोटो खिच् त ?” विकेशले पनि क्यामेरा अन गरेर हामीतिर सोझ्यायो । मैले विकेशको आमाको पोका निचोर्दै भनें “जाँठी रण्डी ! छोरासँग त खुब चिकायौ अब मलाई तिम्री छोरीको पुतीमा चिक्न मन छ ?” विकेशको आमाले पनि मेरो लाँडो पेन्ट बाहिरबाटै मुठ्याउँदै भनिन् “कहिं नपाएर अब म छोरीलाई आफ्नै सौता बनाउँछु त ?” मैले फेरी विकेशको आमाको स्कर्टलाई कमरतिर सारेर पुतीमा औंला छिराएर चल्दै भनें “साले छोराको लाँडोले चिकाउँदा चाँही केही भएन नाटक गर्छे… तेरो पुती चाट्दै तेरो छोरीलाई चिक्छु अनि थाहा पाउँछेस् !” र थचक्क भुईंमा बसेर विकेशको आमाको एउटा खुट्टालाई आफ्नो काँधमा राखेर पुतीमा मुख जोडेर चुस्न सुरु गरें, विकेशले हाम्रो फोटो खिच्दै रह्यो । मैले विकेशको आमाको पुतीमा औंला छिराउँदै भनें “आमा ! तपाईसँग मोज गर्छु भनेर आ’को छोरो मैले चिकेको हेर्दै दङ्ग छ ! बोलाउनु न तेस्लाई पनि ! अनि आज तपाईं पनि अलि छाडा छाडा बोल्नु न चिक्न मजा आउँछ ।“ “ओई जाँठा ! के हेरेर बसेको छस् त्यहाँ आईज मेरो पुती चिलाईसक्यो…” अनि विकेशको आमाले एउटा खुट्टा चियाको बोटमाथी टेकाईन्, मैले जिस्कँदै पुठ्ठामा प्याट्ट पार्दै भनें “रण्डीको पुती मात्रै चिलाको हो की चाक पनि चिलाको ?”
“मेरो सबै चिज चिलाको छ नि ! सबै प्वालमा छिराई तेरो घोर्ले लाँडो ! मेरो पुती र चाकलाई छियाछिया पारेर चिक्… थिलोथिलो पार्दे मलाई जाँठा आमाचिकुवा…” विकेश हामीछेउ आईपुगेको थियो, म उठें अनि पेन्ट खोल्दै भनें “जाँठी भालुको आज म सुरुमै चाकमा ठोक्छु… तेल नलगाईकन… बाँदरको चाक जस्तै बनाईदिन्छु चिकेर…” “चिक् न त तँलाई कसले नाईं भनेको छ र ? मेरो पुती लगायत सबै प्वाल चिकाउनकै लागि त हो नि… जिन्दगीभर नबिर्सने गरि चिक् न !” विकेशलाई चियाको बोटमा लाँडो उत्तानो फर्काएर सुत्न लगाउन नपाउँदै उसको आमाले विकेशको पेन्टको जिपर खोलेर लाँडो चुस्न सुरु गरिन्, मैले उनको चाक आफूतिर फर्काएर सोझै लाँडो उनको चाकमा ठेलें, तयार नहुँदा चाकभित्र लाँडो छिराउदा साह्रै गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, तर पनि विकेशको आमाले चाकलाई चुमुक चुमुक पारिन् र उनको चाकमा सुख्खा घर्षण गराउँदै मेरो लाँडो छिर्*यो, आधा लाँडो भित्र छिर्दा साह्रै कडा अनुभव भईरहेको थियो भनें सुख्खा चाकमा लाँडो छिरेकोले होला लाँडो टुप्पो छोप्ने लचकदार छाला निकै तन्किएर च्यातिएला झैं भयो । मलाई त तेस्तो भयो भने विकेशको आमालाई के भयो होला तपाईहरु नै कल्पना गर्नुस् । विकेशको आमाको मुखमा विकेशको लाँडो थियो, तर लाँडो हुँदाहुँदै पनि उनको मुखबाट निकै पीडादायी आवाज निस्कन खोज्दै थियो । “जाँठीको चाक आज गजब टाईट छ…” भन्दै मैले जोडले उनको चाकमा थप्पड बजाउँदै धमाधम लाँडोले चिक्न थालें, दुई मिनेटसम्म उनको चाकमा चिक्दा मेरो लाँडो साह्रै टनटनायो र भनें “जाँठीको चाकले त मेरो लाँडोलाई निकै गाह्रो पो पार्*यो ?” स्थिती यस्तो अवस्थामा पुग्यो की मेरो लाँडोले उनको चाकभित्र हावा बन्द गरेर यता न उताको भएको थियो, भित्र छिराउनलाई ठाँउ थिएन र बाहिर निकाल्नलाई लाँडो निस्कने छाँट थिएन । कुकुरको अड्किएझैं मेरो लाँडो उनको पुतीमा अड्कियो, अब या त मैले लाँडो सुत्ने बेलासम्म कुर्नु पर्थ्यो या त अरु कुनै उपाय गर्नुपर्थ्यो । मैले मुखभरी थुक जम्मा गरें र पुठ्ठाको केही माथी खोल्सोमा थुकें अनि औंलाले थुकलाई घसार्दै चाकको प्वालसम्म ल्याउन थालें तर थुकलाई भित्र छिराउने पो कसरी ? सबै थुक चाकको प्वालमा लाँडोको वरिपरि भएपछी मैले निकै बल लगाएर बाहिर तान्ने कोशिस गरें तर थोरैमात्र लाँडो बाहिर आउन सफल भयो । मैले जति लाँडो बाहिर निस्केको छ त्यति भागमा फेरी थुक दलें र फेरी भित्र छिराएँ । यसो गर्दा गर्दा निकैपटक सम्म थुकलाई भित्र छिराएपछी लाँडोले उनको चाकभित्रबाट सेतो फिंजजस्तो पदार्थ बाहिर निकाल्यो, र त्यो फुसी थिएन । हल्का सजिलो हुन थालेपछी मैले फेरी थुक चाकमा फालेर जोडजोडले उनको चाकमा ठोक्न थालें ।
brother and sister, chikeko katha, chikeko katha haru, chikeko katha nepali, chikeko nepali katha, chikeko story, chikeko story nepali, chiyabari ma chikeko, chiyabari ma chikeko katha, erotic sex story, hot and sexy story nepali, nepali erotic story, nepali sex stories
भाग्यमानी छोरो – Part 28 – फेरी चियाबारीमा 2